၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ပြည်နယ်အဆင့် စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက် ဆင့်ပွားသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စာရင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်စွာ ရရှိပြီး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ပြည်နယ်အဆင့် စာရင်း စစ်၊ စာရင်းကောက် ဆင့်ပွားသင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားအား (၃.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ (၀၉၀၀)နာရီအချိန် လွိုင်ကော်မြို့၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သင်တန်းသား/သူများ စုံလင် စွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယနေ့ အခမ်းအနား သို့ ကြွရောက်လာသည့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် သင်တန်း သား/သူများအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ ကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးသည့် တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ရှိပါ ကြောင်း၊ အဓိကရည်ရွယ်ချက်အနေနှင့် နိုင်ငံ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တည်ဆောက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုး မှုအရွေ့ကိုသွားရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အားနည်း ချက်များကို ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက် အမှန် များရရှိပြီး ပုံဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စာရင်းများ ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်(၃)ရပ်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ပထမအချက်အနေနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ကြားကာလရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အနီးစပ်ဆုံး မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်ရန်၊ ဒုတိယအချက်အနေနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်၏ ပြောင်းလဲမှုများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုတေသနပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် တတိယအချက်အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် လိုအပ်သော အညွှန်းကိန်းများ ရရှိနိုင်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက် (၃)ရပ်ဖြင့် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိအနေနှင့် ယနေ့အခမ်းအနားတွင် စာရင်းကောက်ယူဆောင်ရွက်မည့် သူများကို အားပေး ဂုဏ်ပြုလို၍ တက်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး အားနည်း ချက်များ၊ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အချက်များရှိပါက တင်ပြ ပေးရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ (၁၀)နှစ် တစ်ကြိမ် ကြားဖြတ် သန်းခေါင်စာ ရင်းကို ကောက်ယူနေသည်ဟု သိရှိရပြီး စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက်ယူမည့် မောင်မယ်များ အနေ နှင့် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင် အကျိုးဖြစ် ထွန်း မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အနာဂတ်ကာလတွင် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် စာရင်း စစ်၊ စာရင်းကောက်များ အနေနှင့် စိတ်စေတနာ ကောင်းမွန် မှန်ကန်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြစေလိုပြီး အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို နှလုံးသွင်းမှတ်ယူစေလိုပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနှင့် လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများ ကို လည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်း ပြည်နယ်အဆင့် စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဘောလခဲခရိုင် ဦးစီးအရာရှိမှ စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက် ဆောင်ရွက် ခြင်း အတွက် သင်တန်းသူသား ၎င်းတို့၏ မြေပြင်ကွင်း ဆင်း ကောက်ယူရာတွင် နေ၊ ထိုင်၊ စားသောက်ရေး အတွက် အဆင်ပြေစေလိုပါကြောင်း၊ စာရင်းကောက်ယူ ရာတွင် စာရင်းကောက်ယူမည့် ကာယကံရှင်နှင့် အဆင် ပြေစွာ စာရင်းကောက်ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးစေ လိုပါကြောင်း၊ မြေပြင် အခြေအနေတွင် စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက် ဆောင်ရွက်စဉ် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးမှူးမှ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျည်း၍ ၎င်း၏အတွေ့အကြုံ များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး အဓိကအနေနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် အချက်အလက် နှင့် ယခုကောက်ယူရရှိမည့် အချက်အလက်များကို ချိန်ထိုး၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် သင်တန်းသားတစ်ဦးမှ ၎င်းတို့အနေနှင့် နေ့တွက်စရိတ်မှာ တစ်ရက်လျှင် (၄၈၀၀)ကျပ်သာရရှိ၍ စရိတ်လုံလောက်မှုရှိစေရန်အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေနှင့် တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါကြောင်း တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ တင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်း သား/သူ (၆၆)ဦး၏ (၂၇.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၇.၁၂. ၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ သင်တန်းကာလ(၁၁)ရက်အတွက် တစ်ရက်လျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ စာရင်းကောက်ယူမည့်(၁၁.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၄.၁၂. ၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း (၁၄)ရက်အတွက် တစ်ဦး လျှင် ငွေကျပ် (၃၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း စုစု ပေါင်း ငွေကျပ်(၄၁၆၀၀၀၀)အား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကာ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။